Samadhan News कसैलाई सजिलो पार्न काम गर्दिनँ – SAMADHAN NEWS
कसैलाई सजिलो पार्न काम गर्दिनँ
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर सरकारले सीता पौडेललाई पदमा नियुक्त गरेको छ । माओवादी निकट शेरचनलाई हटाएर ओली निकट पौडेललाई पदमा नियुक्त गरिएको हो ।
सीता पौडेल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कि अगुवा हुन् । उनी चितवनबाट एमालेकी उम्मेदवार पनि थिइन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाकार विज्ञ समूहमै छिन् । पोखरामा भएको अखिल नेपाल महिला संघको महाधिवेशनाट विद्या भण्डारी अध्यक्ष हुँदा पौडेल महासचिव थिइन् ।
प्रस्तुत छ प्रदेश प्रमुख पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश
गण्डकी प्रदेशको तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुनुभएको छ, अहिलेको राजनीतिक विषम परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
मैले जीवन नै राजनीति र संघर्षमा गुजारें । आन्दोलनमा होमिएँ । पार्टी र जनताका निम्ति भनेर खटिएँ । आज त्यसैको फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख बनाउनुभएको छ । पदीय मर्यादा र दायित्व हेरेर सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्ने छु । धेरै समस्या त त्यहीँ पुगेपछि थाहा होला । जुन पार्टीमा लागे पनि सबैको साझा बन्ने प्रयत्न गर्ने छु ।
चुनौतीको आत्मसात गरेर आएकै कारण अहिलेसम्म राजनीतिमा टिकेकी हुँ । नत्र चुनौतिको सामाना गर्न नसकेको भए ५० वर्षको राजनीतिक यात्रा तय हुँदैनथ्यो । सबै जानेर आइएको हुँदैन, सिक्दै जाने हो । कर्तव्य, अधिकार क्षेत्र सबै कुरा ख्याल गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी दिनुभयो भन्ठानेकी छु ।
प्रदेश प्रमुखलाई निष्पक्ष र तटस्थ पद मानिन्छ तर गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव संसदमा रहेका बेला सेटिङ मिलाउन तपाईंलाई जिम्मेवारी दिइयो भन्ने आरोप छ नि ?
प्रदेश प्रमुख फेर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा हो । उहाँले मूल्यांकन गरेर जसलाई प्रदेश प्रमुख बनाउँदा त्यहाँको समस्याको ट्याकल गर्न सक्छ भनेरै मलाई पठाउनुभएको होला ।
सत्तारुढ दललाई सजिलो पार्नका निम्तिमात्रै पक्कै होइन होला । म मेरो पदीय जिम्मेवारीबाट के भूमिका निभाउनुपर्छ, पदीय मर्यादा कसरी कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा निष्पक्ष लाग्ने छु ।